Usablenet dia nanomana andiana infografika vaovao izay mampiseho ny fivoaran'ny finday haingana ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny statistika miresaka ny fiakaran'ny mpandeha finday maoderina, ny valiny mahagaga azo avy amin'ny programa fahatokisana finday amin'ny faharetan'ny famandrihana, ny fanaovan'ireo millennial laharam-pahamehana ny finday. amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo amin'ny dia, sy maro hafa. Ny andiany feno dia ahitana fitadiavana entana toy ny: Millennial no mitarika ny saram-pitaterana finday: ny ankamaroan'ny mpandeha finday dia mpanjifa eo anelanelan'ny 25-44 taona.
Fitomboan'ny tablette: statistikan'ny fampiasana sy fanantenana
Alahady, Jona 29, 2014 Douglas Karr
Mpampiasa takelaka mazoto aho… manana iPad sy iPad Mini ankoatry ny MacBook Pro sy iPhone. Ny mahaliana dia mampiasa manokana ny fitaovana tsirairay aho. Ny iPad Mini, ohatra, dia takelaka tonga lafatra hoentina any am-pivoriana sy amin'ny dia ataon'ny orinasa izay misy dia an-tongotra be dia be ary tsy te hisintona ny solosaina finday sy ny tariby, ny charger ary ny kojakoja ilaina rehetra aho. Mijanona matetika ny iPad-ko